“Nin Yuhuud ah ayaa sanad qarinayey adiguna ma hal maalin ayaad magangelin waydey?” – Qiso dhab ah oo qiime badan | Hadalsame Media
Home Taariikh “Nin Yuhuud ah ayaa sanad qarinayey adiguna ma hal maalin ayaad magangelin...
(Hadalsame) 22 Sebt 2020 – Boqor la oran jirey Xakam ibn Hishaam oo xukumayey Andalus (Spain iyo Portugal) sannadihii 180H ilaa 206H ayaa dadkii ka cawdeen xumaantiisa. Culimadii ayaa kacdoon samaysay. Laakiin ciidankiisii ayuu hawl geliyey oo kacdoonkii demiyey. Shiikh la yiraahdo Daaluut oo ka baqayey boqorka ayaa ku dhuuntay guri uu leeyahay nin Yuhuud ah.
Previous articleImaaraadka oo arrin Turkiga ka dhan ah Maraykanka u bandhigay & jac lagu dhejiyey!
Next articleHalkee sii marayaa dhismaha jidka isku xira Muqdisho & Afgooye + Sawirro